Mahatratra ny tanjona voalohany
Mihazakazaka miaraka amin'ny ankizy
Ny fihazakazahana dia nankafy laza malaza nandritra ny fotoana kelikely - mihamitombo ny fironana amin'ny jogging. Manomboka amin'ny fisolokiana, mpiady atleta antonony mifanohitra amin'ny kilao ka hatrany amin'ny Adonis vy (sy ny sakaizany vavy).
Jogging - ny fomba hisorohana ny olana amin'ny nono
Amin'ny lobany misy loko maro loko, izy rehetra dia ampahany amin'ny fisehon'ny faritra fialam-boly eo an-toerana - ary isaky ny tanàna manana fizakan-tena dia mandray anjara amin'ny hetsika mihazakazaka. Ho an'ny vao manomboka kosa dia misy fitsipika vitsivitsy hanombohana.
Jogging - mihazakazaka amin'ny fanatanjahan-tena bebe kokoa
Ny tanjona voalohany rehefa jogging dia tokony ho zava-misy sy azo tratrarina. Mazava ho azy fa miankina amin'ny toe-javatra ara-batana voalohany izany ary noho izany dia sarotra ny mamorona ankapobeny.
Amin'ny ankapobeny, dia tsara ny manomboka amin'ny fifandimbiasana eo anelanelan'ny mandeha sy ny fihazakazahana. Mila mijery samirery ny tsirairay raha mitranga isaky ny 3, 5 na 10 minitra izany. Miakatra tsikelikely ny ampahany amin'ny fihazakazahana ary hahena ny fiatoana mandeha mandra-pahatongany tsy ilaina intsony.
Mety tsara ny manomboka ny fihazakazahana tsirairay miaraka amina tongotra mandeha hanafana ny hozatra, izany dia misoroka ny fihenjanana. Ny fitomboan'ny fampisehoana dia mipoitra haingana, izay manentana ny antony manosika. Mety tsy misy fanatanjahan-tena hafa izay ahitan'ireo vao manomboka fanatsarana haingana sy mitohy.
Mitandrema anefa: ny hozatra sy ny tonon-taolana dia tsy maintsy atsangana miadana amin'ny filalaovana jogging mba hisorohana ny ratra, ary ireo izay manana hozatra maratra dia efa nihoatra ny fetra mavesatra indrindra. Tsy mampaninona ny mahazo fampahalalana fototra momba ny fomba hazakazaka mahitsy hatrany am-piandohana - misy sehatra be dia be ny forum Internet sy ny literatioran'ny manam-pahaizana manokana - satria ny teknika tsara dia manakana ihany koa ny ratra sy ny famantarana ny fahalemena.
Vetivety dia tratra ny tanjona kely voalohany (angamba 2, angamba 5 km), ary ankehitriny mila paikady maharitra ianao hijanonana eo amin'ny baolina. Ary eto indray: "Mihazakazaka" samy hafa ny mpihazakazaka rehetra. Raha misy olona mila tanjona lehibe (maharitra) toa ny fandraisana anjara amin'ny hazakazaka antsasakadiny na marathon iray manontolo, dia afa-po amin'ny fahatapahana tsy tapaka amin'ny rivotra madio ny olona iray hafa ho antony manosika.
Ny fanapahan-kevitra momba ny hoe tsara kokoa ve ny mihazakazaka irery na miaraka amina vondrona iray rehefa mihazakazaka dia iray ihany. Ny fihazakazahana miaraka dia manana tombony maro: amin'ny lafiny iray, ny fahatsapana ny adidy ara-tsosialy hitazona ny fanendrena iraisana, etsy ankilany, ho fanaraha-maso miaina tsara indrindra. Ireo mbola afaka miresaka dia mbola milamina ihany.
Ny lohahevitry ny fitaovana mihazakazaka dia lasa lasa ala tsy voafehy, ary ny fanambarana hoe "tsy mandany vola" dia tsy ho voatazona mora foana. Nefa misy zavatra vitsivitsy azonao atao raha tsy manomboka.
Ny zavatra voalohany aloha: tsy tokony hitsimpona ny kiraronao ianao. Mba hahitana ny kiraro mety dia tokony hitsidika fivarotana manam-pahaizana manokana ianao izay manolotra famakafakana treadmill tsirairay. Ny firaketana horonantsary dia ampiasaina hamaritana izay kiraro manohana tsara ny tongotra. Miaraka amin'ny vintana kely dia mety hahita modely naato ianao, mba hahafahanao mitahiry kely nefa tsy mahafoy kalitao. Tsy mamporisika ny kiraro mihazakazaka avy amin'ny magazay misy fihenam-bidy izahay, satria tsy mahafeno ny fepetra takian'ny kalitao.
Miaraka amin'ny sisa amin'ny akanjo mihazakazaka ianao dia mety tsy ho takiana firy, ny akanjo marika lafo vidy dia azo antoka fa tsy ilaina. Tokony ho akanjo anatiny izy io, satria mampita hatsembohana tsara kokoa, saingy misy vola kely ihany koa.
Rehefa mihazakazaka amin'ny vanim-potoana mangatsiaka anefa ianao dia tokony hitafy akanjo mifanaraka amin'izay, zava-dehibe ny palitao hazavana, tsy misy rivotra ary mandroaka rano mba tsy hisongona be loatra. Ho an'ny vehivavy, mazava ho azy, mbola misy ny olan'ny spaoro, izay mila saina ihany koa mandra-pahita ny maodely tsara indrindra.
Ho an'ny mpihazakazaka maro dia sarotra ny maka sary an-tsaina ny fanaovana tsy misy fanampiana elektronika isan-karazany, ohatra. B. ny mpanara-maso ny tahan'ny fo. Toy ny be dia be, ity iray ity dia manana tombony sy fatiantoka. Na dia mahomby tokoa aza io fifehezana io amin'ny fampitandremana amin'ny fahaverezan-tena ara-batana, dia manakana ny fivoaran'ny tombana tena ara-pahasalamana izany. Ny sokajy "kilalao mahasoa" dia ahitana ireo fampiharana mihazakazaka maro izay afaka mampitombo ny antony manosika, indrindra raha azo apetraka amin'ny media sosialy ny valiny.
Ny ray aman-dreny dia tokony hampahafantatra ny zanany amin'ny fihazakazahana am-pitandremana mba tsy hampitombo azy ireo ara-batana. Na dia tsy tokony hiditra amin'ny lalao mihazakazaka kely fotsiny aza ny ankizy ambaratonga voalohany, ny zaza 9-12 taona dia afaka mihazakazaka lavitra kokoa tsy tapaka; raha tianao!
Fa na dia amin'izy ireo aza dia tokony homarihina fa ny enta-mavesatra mifandraika amin'ny fitomboana sy ny fahavoazana vokatr'izany dia mety hipoitra haingana. Ho fanampin'izany, ahiana ny hafanana be loatra, satria kely kokoa ny hatsembohan'ny ankizy, noho izany dia tsy voafehy tsara ny fandanjana hafanana. Noho io antony io, ny fisotroana dia zava-dehibe kokoa noho ny an'ny olon-dehibe.
Ny fiofanana momba ny hazakazaka matetika dia azo atomboka amin'ny taona fahatanorana, saingy mbola misy ny fitomboan'ny risika ny tsy fitandremana ny adolantsento noho ny fitomboany haingana. Amin'ny ankapobeny, na izany aza, ny 15 dia taona fanombohana tsara amin'ny fihazakazahana.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 15. Aogositra 2020 15. Jolay 2021 Sokajy Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tenaKeywords Fitness, mihazakazaka, Laufen, Fanatanjahantena
indray Lahatsoratra taloha: Manomboka amin'ny akanin-jaza ka hatrany am-pianarana
more Lahatsoratra manaraka: Vola am-paosy - | Vola fanabeazana